Beamng Drive - kungcono pretty engavamile imoto Simulator, sihluke imidlalo iningi leli cebo, zijwayele abadlali. Iqiniso lokuthi le phrojekthi Akusikho okwenu ukubukisa amakhono akho at kwesondo, hhayi ukuze ukukuvumela ukumpompa ibhala yami ukuze baba nomhawu konke. Injongo eyinhloko yale mdlalo sekulingisa umonakalo ukuthi uthola imoto lapho kungqubuzana izimoto. Ngakho, ungakhetha noma iyiphi imoto yohlobo futhi ibenze ke odongeni noma yimuphi omunye isithiyo, kanye nezinye izimoto. Isici esikhethekile msebenzi physics enemininingwane kakhulu evumela ukukhombisa ukushayisana cishe ncamashi njengoba kuzokwenzeka empilweni yangempela.
Ngokwemvelo, zonke Gamer ufuna ukuba eqoqweni yabo like umdlalo, kodwa kulokhu kufanele kuqala kunazo zonke ukucacisa izidingo zohlelo Beamng-Drive. Iqiniso liwukuthi nazo zonke eziyisisekelo ababukeka yokuntuleka ngokuningiliziwe cwaningo models imoto izwe zinengqondo kakhulu, futhi ngempela umdlalo wadedelwa muva nje, ukuze izidingo kungaba ngempela eliphezulu. Kodwa akunandaba mqondo ukuqagela, kungcono ukuhlola ukuthi hlobo luni nezidingo zomshini Beamng Drayivu ebuzwa onjiniyela.
Ngaphambi kokucabangela ngokwabo ngqo Izidingo zesistimu Beamng-Drive, sibheke usuku ukukhululwa, njengoba kushiwo ngenhla, futhi udlala indima ebalulekile. imidlalo abadala bavamile akudzingi umtfombo ezimbalwa kude computer, imiklamo wesimanje ngaphezulu. Ngokuphathelene le Simulator, yangena emakethe ngoMeyi 2015, ngakho ungalindela nezidingo zomshini sina ngempela ngoba Beamng-Drive. Lo mdlalo, okuyinto sisanda kugubha elisonyakeni walo wesibili, kusekusha emakethe amageyimu, ngakho ungamangali uma ukubona, yini okufanele kukhompyutha yakho ukuze ke ukuthi uhambile.
Kuyaphawuleka ukuthi lo mdlalo wadedelwa kuphela ku-PC, nezidingo zomshini Beamng-Drive, ngokufanele, kungukuthi aguqulelwe console ukuthi kwaba nethonya elihle, ukukhipha amanye imikhawulo.
Ngakho, okokuqala kunakho konke, yebo, kudingeka sibheke imibundu okufanele zifinyelelwe kukhompyutha yakho ukuze bonke bakwazi ukudlala lo mdlalo. Udinga uhlelo lokusebenza engu-Windows 7, wokugaya ifakwe cores okungenani amabili (nuclei ukusebenza akunandaba konke okuningi), emibili gigabytes RAM kanye ihluzo ikhadi nge inkumbulo okungenani 512 wamamegabhayithi. Futhi, uzodinga ukhulule gigabytes okungenani ezine kanzima sediski ukufaka kukhompyutha yakho.
Yiqiniso, akuwona wonke umuntu uyokwaneliswa esiphansi, ngakho kufanele nakanjani ukhulume futhi uhlelo Kunconywa izidingo ku-PC ukuze Beamng-Drive. Uzodinga konke okufanayo ezimbili-core processor, kodwa gigabytes okungenani eziyisishiyagalombili RAM kanye gigabyte inkumbulo vidiyo. On the hard drive usadinga gigabytes ezine yesikhala samahhala.
Yekuchumana sendlela ukwenza isicupho esifubeni "Maynkraft"
Imfashini Global ku "Skyrim": ukukhethwa the best
Njengoba e "Maynkraft" ukwenza ibhakede, nokuthi ukuyisebenzisa?
Iphupho amagundane: ikhale alamu noma cha?